Ma jiraan wax dheeraad ah oo ku niyad-jab badan laga badiyay aad faylasha, sawirada, iyo macluumaad kale, haddii ay tahay qalad aad adiga ama qof kale waa. Nasiib wanaag, waxa jira qalab badan oo maalmahan kaa caawinaya inaad soo kabsado aad files lumay oo la tirtiro. Qaar ka mid ah xitaa lagu dhiso karo files dhaawacan qaarkood. Qaar badan oo ka mid ah qalabka ay awoodi karaan inay ka soo kabsadaan faylasha aad jidka in mashiinada Windows iyo Mac xamili xogta aad mahad.
Dhamaan files ku qoran yihiin in ay aad disk adag. Waxaa lagu hayaa halkaas inta aad go'aansato in laga takhaluso iyaga ka mid ah, ama ilaa aad si qalad ah uga takhalusi iyaga ka mid ah. Marka aad ku tilmaamay faylka sida la tirtiro Windows / Mac ma dhab ahaantii tirto faylasha gebi ahaanba. Halkii, boos oo files uu degan waxaa loo summadeeyay.
Qalabka soo kabashada file intooda badan ay ku tiirsan yihiin xaqiiqda ah in files ee aan jir ahaan tirtiray, laakiin si fudud calanka sida tirtiray. The file wayn, waa ku sii adkaanaysaa in ay soo kabsadaan sababta oo ah waxaa suuragal u ah sare oo faylka wax laga overwritten yahay. Taasi waa sababta waa in aad isticmaasho qalabka undelete sida ugu dhakhsaha badan file la tirtiray.
Qalabka Undelete ugu fiican u shaqeeyaan marka aad soo kabsado faylasha tirtiray in drive kale. Saas waxaa ugu wacan soo kabashada ku salaysan yahay muqato faylka si drive ah; Ma doonayo in aad qori ka badan faylasha kale in la soo kabsaday laga yaabaa. Drive kale oo noqon kartaa disk kale u adag, USB, ama qalab kale oo USB dibadda kasta.
Sidoo kale, waa cajiib adag inuu ka soo kabsado files ka drive waxyeeleeyeen la isticmaalayo inta badan qalabka dib u soo kabashada, gaar ahaan kuwa lacag la'aan ah. Qalabka qaaliga ah isku deyi karaan kabashada qayb ahaan oo kaliya, laakiin fursadaha u soo kabashada dhamaystiran aad u yar yihiin. Halkan waxa ku jira 5 qalabka our undelete sare ee Windows / Mac.
Qaybta 1aad Recuva
Recuva waa awoodaa inuu ka soo kabsado files ka your computer, camera, iPod iyo Flash Drive. Ka sokow awoodda undelete, Recuva sidoo kale uu awood u leeyahay in ay tirtirto wax joogto ah.
Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo software this. Waxaa jira laba hab kabashada: Deep Scan iyo Quick Wizard. Deep scan aad u saamaxaaya in ay soo kabsadaan files in la tirtiray xitaa sanad ka hor inta Quick Wizard keeni doonaa files dhawaan la tirtiro. Recuva waa fududahay in la isticmaalo iyo si degdeg ah u gaarsiiyaan.
Part 2 CD Recovery qalabeed
CD-kabashada qalabeed ka hadlaya kabsaday burburay iyo files tirtiray ka CD-yada iyo DVD-aad. Qalabkani waxa uu yahay weyn u soo kabsaday files ka cajalladaha xoqo ama la waxyeeleeyey. Hadda, uma baahnid inaad wax laga walwalo mar kale laga badiyay files kuwan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira khasaaro yar in qalab this. Tan waxaa loo sameeyey dadka aawadiis ee soo kabsaday kaliya files ka CD-yada iyo DVD-yada, waxaa laga yaabaa in aanay awoodin inay soo kabsadaan xogta ka soo qayb ka mid ah disk la si xun u dhaawacay. Ka hor inta isticmaalka, software aad ka digay in aan laga yaabaa in ay awoodaan in ay ka bogsanayaan oo dhan xogta si guul leh.
Part 3 UndeleteMyFiles Pro
UndeleteMyFiles Pro waa qalab aad u wanaagsan. Waxaa la mid ah Recuva, waxayna leeyihiin sifooyinka badan oo la mid ah. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee qalab tani waa in ay u sahashay in ay raadiso file u gaar ah.
Xaqiiqadaas dardar doonaa geeddi-socodka lagu soo kabsaday file hal. Maxay sidoo kale waa weyn oo ku saabsan UndeleteMyFiles Pro, waa in ay kuu ogolaanaya in aad ku eegaan waxyaabaha file ah ka hor inta aysan soo kabsaday. Its feature ugu fiican waa in marka lagu sawiro ee files tirtiray, kuu oggolaadaan in aad si aad u ogaato waxyaabaha aad rabto in aan la shaqeeyo si toos ah uga drive adag.
Qeybta 4 PhotoRec
PhotoRec waa aalad awood u kabashada sawir digital. Sidaas, waxa uu diiradda saarayaa sawiro, laakiin waxa ay weli soo kaban karto, qaar noocyada file kale.
Photorec aado guntiisa ku files tirtiray, oo nuqullo ka samaynaya oo aan badalayn wax kale oo aad drive. Markaas, macluumaadka ayaa la idiin dhiibay.
Qeybta 5 Wondershare Data Recovery
Wondershare Data Recovery waa mid ka mid ah qalabka soo kabashada fiican ee jira. Waxaa aad isku halayn karo, wuxuuna ka shaqeeyaa si degdeg ah. Waxaad kala soo bixi kartaa version ah oo lacag la'aan ah, ama soo iibsadaan alaabta buuxa. Wondershare Taageertaa qalabka oo dhan, drives iyo noocyada file. Qalabkani waxa uu awoodo inuu ka soo kabsado files ka lumay xitaa sanad ka hor, iyo files in waxyeelo. Sidoo kale, Wondershare soo kaban karto, files in la tirtiro shil, howlgal aan habboonayn, shil disk adag ama fayras computer xaasidnimo.
Tool Taageerayaan Systems Noocyada File taageerayaan Qalabka ay taageerayaan Speed Kartida Recovery Halaynta
Recuva Windows Ku dhawaad ​​kasta Hard Disk, iPod, Flash Drive, Camera Ku xiran tahay si qoto dheer ee sawirka. Celceliska Lagu kalsoon yahay
CD-kabashada qalabeed Windows Ku dhawaad ​​kasta CD, DVD Fast Wuu isbaddalaa hadba sida Ma lagu kalsoonaan karo
Wixii UndeleteMyFiles Windows / Mac OS X Ku dhawaad ​​kasta Hard Disk Fast Celceliska Lagu kalsoon yahay
PhotoRec Windows / Mac OS X Diiradda saarayaa images Hard Disk Fast Celceliska Lagu kalsoon yahay
Wondershare Data Recovery Windows / Mac OS X / iPhone / Android Dhammaan Noocyada File Hard Disk iyo drives dibadda (USB drive, camera, iwm) Aad Fast Sare Aad lagu kalsoon yahay
Wondershare Data Recovery Waa mid ka mid ah qalabka soo kabashada fiican ee jira. Waxaa aad isku halayn karo, wuxuuna ka shaqeeyaa si degdeg ah. Waxaad kala soo bixi kartaa version ah oo lacag la'aan ah, ama soo iibsadaan alaabta buuxa. Waxa ugu fiican waa, waxaa aad u sahlan in ay isticmaalaan. Haddii aad bilaabayso, waxaad soo kaban karto xogta ku Wizard Mode. More users sare isticmaali kartaa Standard Mode. Halkan waxa ku jira saddex tallaabo oo fudud.
1. Dooro Nooca File iyo Location la doonayo
Waxa ugu horeeya ee ay tahay in aad samayso waa in aad doorato nooca faylka gaarka ah, ama haddii aadan hubin inaad isha marisid kartaa dhammaan faylasha on your computer.
Markaas, waxaad dooran kartaa meel cayiman, ama si fudud computer oo idil laga baarayo.
2. Dooro Scan Type
Tallaabada xigta waa in ay doortaan nooca scan: Deep Scan ama Recovery File ceeriin ah.
3. Kulanka Xiisaha Iyo faylasha iyo kaban
Iyo in ay tahay! Si fudud ku eegaan files iyo mid ka mid ah aad ku raadineyso dooran.
Waayo, natiijada soo kabashada fiicnayn, waa ikhtiyaarka ugu fiican ee qalabka undelete rakibay hor file la tirtiray. Sidoo kale, ka dib markii aad tirtirto faylka hubi inaad isku dayaan in ay u soo kabsado si dhaqso ah, oo aan rebooting your computer ama ku rakibidda / duuban wax files kale. Waayo, natiijooyinka ugu fiican, isku day inaad ka soo Wondershare Data Recovery. Tani qalab undelete awood badan soo kaban karto, nooca file tirtiray xitaa sanad ka hor wax.
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Xogta laga Centon Electronics DataStick
> Resource > Ladnaansho > Top 5 Undelete Tools for Windows / Mac